AMISOM oo Shaacisay in Gawaari looga Gubay dagaal Al-shabab la galeen – Radio Daljir
Oktoobar 5, 2015 5:49 b 0
Isniin, Oktoobar 05, 2015 (Daljir) —Taliyaha Ciidamada Difaaca dalka Uganda General Katumba Wamala oo wareysi siinayay wakaalada wararka Shiinaha ee Shinwaa ayaa sheegay in dagaalka ay kula jiraan Xarakada Al-shabaab ee Soomaaliya ay ku wayeen gawaari badan oo kuwa dagaalka gaar ahaan kuwa Taangiyada,isagoona xusay in loo baahan yahay in ciidamada ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku helaan gawaaridaasi.
Wamala ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada Lugta Uganda ee qeybta ka ah kuwa AMISOM aysan hadda ku filneen Taangiyada ay uga qeyb qaataan howlgalka Soomaaliya ka socda waxana uu sheegay in intoodi badneyd ay ku bur bureen qaraxyada ay kala kulmaan Al-shabaab.
General Katumba Wamala Taliyaha Ciidamad Difaaca Uganda ayaa qirtay in ay jirto awood yari soo wajahday ciidamada AMISOM balse waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in lagu saacido howlgalka soconayo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Helkobtariska ah iyo kuwa askarta qaada.
Wamala ayaa tilmaamay in hadii ay helaan tiro badan oo taangiyada dagaalka ay wax ka badali karto dagaalka ka dhanka ah Al-shabab.
Uganda ayaa uga mahadcelisay Dowladda Shiinaha balan qaadka teegarada Militeri ay siinayso ciidamada Nabad Ilaalinta u jooga Soomaliya,Taliyaha waxa uu sheegay in qalabka Militeri ay ka heli doonaan Shiinaha ay noqon doonto mid sameyn ku yeelata Qaarada Africa.
Danjire Kay oo Canbaareeyay Xariga wariyayaal ka tirsan Universal